Soomaaliya, 26 February 2018
Isniin 26 February 2018
VOA oo ka Tiiraayeysan Geerida Axmed Xasan Colaad
Idaacadda Codka Mareykanka, gaar ahaan qeybta Soomaaliga ee VOA Somali Service, ayaa ka tiiraayeysan geeridii ku timid ALLAHA u raxmadee Axmed Xasan Colaad, oo ahaa wakiil wareedkii VOA ee magaalada Muqdisho. Colaad, ayaa Muqdisho ku dhintay habeenkii Jimcaha ee 23-kii Febraayo 2017.
Wareysi & Falan-qeyb ku Saabsan Amniga Muqdisho
Dawladda Soomaaliya ayaa mar kale sheegtay maalintii shalay in la bilaabay wareeg kale oo hawl gal dhinaca amniga ah gudaha magaalada Muqdisho.
Dhinaca kale Danjire Madeira waxa uu ka hadlay shil ay ku lug lahaayeen ciidamada Midowga Afrika oo ka dhacay bar kontorool oo ku taalla Lambar 4, kaasi oo ay ku dhinteen labo ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ayna ku dhaawacmeen lix qof oo kale
Bukaanno La Ildaran Shuban Biyood oo Buux Dhaafiyay Isbitaalka Jowhar
Meelo badan oo ka mid ah dowlad goboleedka Hir-Shabella, waxa laga soo sheegayaa dhibaatooyin la xiriira cudurka shuban biyoodka, kaas oo loo aaneynayo wabiga Shabeelle ee mara deegaannada maamulkaasi, oo marna biyo yareeya, dadkuna ay isticmaalaan biyahaasi.
Muqdisho: Tirada Dadkii ku Dhintay Qaraxyadii oo Korortay
Tirada dhimashada qaraxyadii mataanaha ahaa ee xalay ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa korortay oo gaartay 34 qof. Inta badan meydadka waxaa la geeyay mid ka mid ah isbitaallada magaalada Muqdisho.
Allaha U naxariistee waxaa ku geeriyoodey magaalada Muqdisho, Wariyihii VOA ee magaalda Muqdisho Axmed Xasan Colaad oo xanuun deg deg ah uu lasoo dersay.
Wararka ka imaanaya Muqdisho ayaa sheegaya in weeraro qaraxyo ah iyo rasaas ay ka dhacdey xilligii maqribka meelo ka mid ah Muqdisho.
Maamulka Hobyo oo Dhismayaal Bur-buriyay
Maamulka degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa billaabay howl-gal ay maamulka ku sheegeen soo celinta bilicda magaalada.
Saddex ruux ayaa ku geeriyootay duqeyn xalay ka dhacday tuulada Bangeeni oo 8 KM dhanka galbeed kaga beegan degmada Jamaame ee gobbolka Jubbada Hoose.
Soomaali ka Qeyb-gashay Bandhigga Cuntada ee Dubai
Carwada cuntada ee Dubai Food Festival oo ah carwo caalami ah oo sanadkiiba mar lagu qabtay magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa sanadkan markii labaad waxaa ka qeyb galay ganacsato Soomaaliyeed oo ku soo ban-dhigay badeecadaha wax soo saarka waddaniga ah.